March 28, 2008, 2:40 am
Filed under: Lin Let Kyal Sin, My Opinion
မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ အကုန်ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်မက မြန်မာလူမျိုးအစစ်ဆိုတော့ မြန်မာသွေးဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားချောချောလေးတွေ မြင်ရင်လည်း အရင်တုန်းက စိတ်ဝင်စားဖူးပါတယ် 😀 ။ လူမျိုးမတူသူကို အချို့က လက်ခံလို့ရပေမယ့် ကျွန်မအတွက်တော့ နှလုံးသားက လှုပ်ရှားလို့တောင်မရပါဘူး။ ဘာသာတိုင်းကို ကျွန်မလေးစားပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀လက်တွဲဖော်ကို ကျွန်မ ဘာကြောင့် ဘာသာတူချင်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဘ၀ခရီးတွေ ၊ စာပေတွေနှင့်ပတ်သတ် စကားအဖြစ်ဆွေးနွေးဖလှယ်တိုင်း ဘာသာမတူရင် စကားအမြဲပြောရခက်နေမှာ ကျွန်မ မလိုလားလို့ပါ။ အလှူအတန်းပြုလုပ်တာတွေ ၊ ဘုရားစေတီအတူတည်ချင်တာတွေ ကျွန်မစိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့အတွက် ဘာသာတူဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မက မြန်မာဆန်ဆန်လေးဝတ် ၊ ကျွန်မချစ်သူဘ၀လက်တွဲဖော်ကလည်း ခပ်ရိုးရိုးလေးဝတ်ပြီး ဘုရားအတူတက်ဖို့ပဲ ကျွန်မ ဆန္ဒရှိပါတယ်။
Comment by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် March 28, 2008 @ 3:23 am
စိတ်ကူးနဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ ချစ်သူတယောက်ကို ရခဲ့တဲ့ ညီမ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ..
Comment by myatnoe March 28, 2008 @ 4:12 am
ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ ကံစမ်းရတဲ့ ကံစမ်းမဲအတိုင်းပါပဲ။ သူ့ဘက် ၊ ကိုယ့်ဘက် မျှော်လင့်ချက်တွေပိုမြင့်မားလေ .. ရလဒ်က အနည်းငယ်ကွဲလွဲလာခဲ့ရင်လည်း ခံစားရတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ မိမိလိုချင်သော အရာတွေရှိသလို မိမိဘက်က ပေးနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးပေးအပ်နိုင်သောအရာတွေအတွက်လည်း ကြိုးစားရပါမယ်။ အရေးကြီးဆုံးက ဘ၀မှာ ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားမှုတစ်ခုက ဘာပဲဖြစ်လာလာ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ပါပဲ။
Comment by စိုင်းကျော်စွာ March 28, 2008 @ 5:23 am
ဟားဟားဟားဟား… မိုက်တယ်ဗျာ… အမရေ… တခြားကောင်မလေးတွေကိုလည်း ဒါမျိုးတွေ များများ တက်ဂ်ပါဦး။ ကျနော်တို့ ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး ကိုက်ညီရင် ၀င်ပြိုင်လို့ ရအောင်လို့ပါ။ အဟီး…
Comment by Htoo Myat March 29, 2008 @ 1:12 am
ဟဲ ဟဲ … ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဆုံးက ဓါတ်ပုံလေး အပေါ်ဆုံးမှာ သရုပ်ဖေါ် ပုံ အဖြစ် တင်လိုက်ပါလား .. 😛
Comment by စိုးထက် - Soe Htet ! March 29, 2008 @ 2:03 pm
လာလည် လာဖတ် သွားတယ် ညီမရေ 🙂
Comment by MgThaJan March 29, 2008 @ 6:04 pm
အခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံတဲ့သူတွေဟာ သစ္စာဖေါက်တွေဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြထားပါတယ်။ http://lightofmyanmar.blogspot.com/
Comment by Anonymous March 30, 2008 @ 9:24 am
Comment by မီးငယ် March 30, 2008 @ 10:23 pm
လင်းလက်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်က မျှော်ရကျိုးနပ်တယ်ကွယ်။ ဘေးကနေကြည့်တာနဲ့တင် အရမ်း romantic ဖြစ်တဲ့အတွဲလေးမို့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်လေးဆိုတာ ယုံပြီးသားပါ။ လင်းလက်တို့ အချစ်လမ်းသာယာဖြောင့်ဖြူးပါစေ။ (btw, blogလေးက ပိတောက်ရနံ့တွေသင်းနေတာပဲ)
Comment by တန်ခူး April 3, 2008 @ 4:35 am
တခြားပိုစ့်တွေကိုလဲ ဖတ်မိတယ်။ ဒီပိုစ့်မှာပဲ ပိုစ့်အားလုံးအတွက် ရေးလိုက်တယ်။ စာဖတ်အားကောင်း၊ စာရေးအားကောင်းတဲ့သူလို့ မြင်မိတယ်။ ကိုယ့်ဘဝမှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ချစ်သူမျိုးရတယ်ဆိုလို့လဲ အားကျမိပါရဲ့။ နိုင်ငံရေးအမြင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေသူ တယောက်အနေနဲ့လဲ ချီးကျူးမိပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက (စံတင်ထားတဲ့ ) အချက်တွေကို သိရတော့ အားကျမိပ။ စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ကောင်းတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ အမှန်ပြောရရင် အားပါး.. မလွယ်ပလားလို့လဲ တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်က သာမာန် ခပ်ဆိုးဆိုး လူတစ်ယောက်ကိုး… 🙂
Comment by တားမြစ် ထားသော... April 4, 2008 @ 3:48 am